iPhone 5s - iPhone News | Vaovao IPhone
El iPhone 5s is the IPhone andiany faha-XNUMXToy ny isaky ny roa taona, ny maodely "S" dia endrika namboarina tamin'ny maodely teo aloha. Raha izany dia mitahiry ny famolavolana ny iPhone 5 fa amin'ny fanovana ny loko dia lasa ilay maodely mainty habaka volo (hialana amin'ny fahasimbana rehefa mandeha ny fotoana), mijanona ny maodely fotsy ary misy loko iPhone hita vaovao Dorado.
Ny smartphone voalohany miaraka amin'i Tranokely 64-bit, ny processeur A7 azy dia manatsara ny fahombiazany nefa tsy mampihena ny fizakan-tena; mampiditra a coprocessoror vaovao, ny M7, mahay mandrefy sy mifehy ny fivezivezena rehetra. Ny 5s koa no Smartphone voalohany misy sensor momba ny dian-tànana hamaha, ilay iPhone tsara indrindra nataon'i Apple hatramin'izao.
IPhone 5s misy fanatsarana fakan-tsary, horonan-tsary mihetsika miadana, maodely mipoaka ary tselatra mihatsara miaraka amina LED roa manatsara ny feon'ny sarin'ny alina.
Ny efijery dia 4 santimetatra, ny hateviny 0,76 santimetatra ary ny lanjany dia 112 grama fotsiny, ary vita tamin'ny vy avokoa, tsy nisy plastika kely akory.
Ary izany rehetra izany dia narahin'ny rafitra fiasa vaovao iOS 7Sambany i Apple dia nihodina tanteraka tamin'ny famolavolana endrika ny rafitra saika hatrany am-boalohany, miaraka amin'ireo sary masina tsotra kokoa ary very io endrika hita maso sy miloko io amin'ny fikatsahana endrika mendri-piderana.
Eto no ahitanao ny famerenantsika iPhone 5s feno.
Famerenana horonantsary momba ny iPhone 5s
Ary hamita ny vaovao rehetra ary Fomba fiasa iPhone 5sIty misy famerenana horonantsary nataon'ny ekipan'ny redianay. Izahay no voalohany manana ny iPhone 5s any Espana ary ny voalohany milaza aminao hoe nanao ahoana izany.
Vaovao momba ny iPhone 5s
Etsy ambany izahay dia manolotra anao ny vaovao rehetra momba ny 5s mba hahafantaranao hatrany izay manodidina ny Apple terminal:
Navoaka ny sarin'ny prototype iPhone 5s grafita
Raha ny mahazatra, ny prototypes an'ny fitaovana izay vokarina farany ary ireo izay mijanona ho tetikasa fotsiny dia rava….
Taorinan'ny resabe navoakan'ny FBI sy Apple ho an'ny orinasa monina ao Cupertino hamaha ny ...
Taorian'ny tsaho maro, tsindry ary fanamafisana tsy ofisialy, Apple dia nanolotra ny iPhone SE omaly tolakandro, inona ...
ny Juan Colilla hace 5 taona .
Farany dia voamarina ilay anarana, iPhone SE, azontsika an-tsaina fa avy any Cupertino no nofidian'izy ireo ho an'ny fanontana manokana ary ...
Apple dia mampihena ny vidin'ny iPhone 5s any India
Anisan'ireo firenena izay itomboan'ny Apple haingana, ankoatr'i Sina dia ahitantsika an'i India ihany koa, na eo aza ...
Fampitahana ny hafainganam-pandeha ID mikasika ny iPhone 5s, 6 ary 6s [video]
Ny iPhone 6s sy ny iPhone 6s Plus, izay efa amidy hatramin'ny zoma lasa teo, ny faha-25 tamin'ny…
Apple dia mampihena ny vidin'ny iPhone 6, iPhone 6 Plus ary iPhone 5s
Vaovao tsara sy ratsy. Hanomboka ny tsara aloha aho, satria io no antony lehibe indrindra amin'ity lahatsoratra ity. Ary ahoana ny ...
Ahoana no hahafantarana raha manana fahatsiarovan-tena MLC na TLC ny iPhone 6-nao
Ny maodely sasany amin'ny iPhone 6 sy iPhone 6 Plus manana tanjaka 64 GB sy 128 GB dia manana olana ...
Ny vidin'ny singa amin'ny iPhone 6 dia manodidina ny 200 $
Apple dia afaka mandany $ 200 ka hatramin'ny $ 247 mba hanaovana ny singa tsirairay amin'ny iPhone 6 na eo anelanelan'ny $ 216 ...